News - Shanghai MEOKON 2020 ”Coagulation obi izute ike Mepụta amamiihe, Innovate na Gbalịsie” Sales Department Mgbụsị akwụkwọ otu ụlọ eme
Shanghai MEOKON 2020 ”Coagulation obi izute ike Mepụta amamiihe, Innovate na Gbalịsie” Sales Department Mgbụsị akwụkwọ otu ụlọ eme
Iji mee ka njikọta otu, nkwukọrịta na mmekorita; melite mmata nke na-arụsi ọrụ ike imekọ ihe ọnụ na nkwurịta okwu nkà, na-agba ume otu òtù chere ihu ịma aka, gbasaa site onwe ha, enweta nwere, na hapụ ahuhu; mikwuo emeri na ụlọ ọrụ na omenala “Ming N’obi, KỌNdị na-eme” ka ọ dịgodị, ọgaranya ọrụ ’mapụtara oge. Ngalaba Ahịa Shanghai Meokon nwere ọrụ ụlọ ụbọchị abụọ na Septemba 2020.
Na Septemba 19, ndị ọrụ ngalaba niile na-ere ahịa bịara Suzhou Taihu Sanshan Island, bidoro ọrụ mgbụsị akwụkwọ nwere isi okwu nke "Obi Coagulation na-ezute ike Mepụta amamiihe, Innovate na Strive". Ọrụ a rụrụ ọrụ dị mma iji mee ka ịdị n'otu dị n'otu, Ime ka nkwurịta okwu na mgbanwe n'etiti ndị otu òtù nwee ike ịrụ ọrụ dị mma n'ịkwalite.
Mgbe ha mechara njem ahụ na-enye ọfulụ na gburugburu agwaetiti ahụ, ụlọ ọrụ ahụ malitere. Mgbe nke ahụ gasị, anyị malitere asọmpi ugwu ịgbago. Dịka ndokwa onye nchịkwa ahụ mere, anyị mere PK oge ọ bụla n'etiti ndị otu egwuregwu abụọ. Ndagwurugwu ahụ abụghị nanị na-egosipụta ike enyemaka dị n'etiti ndị otu, kamakwa na-enyere ndị mmadụ aka ịme nke ọma karịa onwe ha; enwere arụkọ ọrụ ọnụ na asọmpi.
Na-agba ịnyịnya gburugburu agwaetiti ahụ
Na mgbakwunye na ndagwurugwu ugwu, anyị na-egwuri egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ- "Ime Anwansi." N'oge egwuregwu ahụ, ụfọdụ ndị na-ahụ maka mmega ahụ na saịtị, ụfọdụ nwere ọrụ maka ịhazi usoro mmejuputa iwu, ụfọdụ nwere ọrụ maka ichetara nlezianya, ụfọdụ nwekwara ọrụ maka ịse foto na vidiyo ... A na-eme njikọ niile n'usoro. na fun ụzọ. Na ngwụcha egwuregwu ahụ, ndị otu ahụ tụkwasịrị ntụkwasị obi na nghọta ha obi na mmekorita.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, ọ bụghị naanị na anyị nwere ụgwọ ọrụ kamakwa anyị ga-ata anyị ahụhụ.
Enwere ihe ijuanya na envelopu na-acha uhie uhie
Ọgwụgwụ nke egwuregwu ụbọchị, mgbede bụ oge anyị na-atụrụ ndụ na oge ntụrụndụ, anụ eji egbu anụ: skewers, kaadị egwu, ịbụ abụ; nọrọ jụụ ma nwee obi ụtọ.
Mgbe anyị mechara ihe omume nke ụbọchị mbụ, anyị bịarutere ugwu Taihang na Sanshan Island n'echi ya. Mgbe anyị na-ekpori ndụ ebe mara mma, anyị gere ntị na akụkọ ntolite na ọdịbendị nke ugwu Taihang nke onye ndu ahụ kọwara.
Buildinglọ ọrụ ụbọchị abụọ ahụ mechara nke ọma. Teamlọ ọrụ ahụ wusiri ike nkwurịta okwu na mgbanwe n'etiti ndị ọrụ ibe, imekọ ihe ọnụ n'ime ngalaba, n'otu oge ahụ, ọ bụkwa ahụmịhe nke imekọ ihe ọnụ.